Mitemo 10 Yemisangano Yakakodzera | Martech Zone
Mitemo 10 Yemisangano Yakakodzera
Muvhuro, Zvita 4, 2006 NeChishanu, Gumiguru 24, 2014 Douglas Karr
Vamwe vanhu vanokwenya misoro yavo pandinononoka kumusangano kana kuti nei ndichiramba misangano yavo. Ivo vanofunga kuti hazvina hunhu kuti ini ndigogona kuratidza kunonoka… kana kusatombouya zvachose. Chavasina kumboziva ndechekuti ini handina kumbononoka kumusangano wakanaka Ini ndinofunga hazvina hunhu kuti vakaita musangano kana kundikoka pakutanga.
Misangano yakakodzera inoshevedzwa pazvinenge zvichidiwa.
Misangano yakakodzera haina kurongerwa kwemakore matatu anotevera… hazvina musoro kudaidza misangano isina chinangwa uye inokanganisa kugadzirwa.
Misangano yakakodzera inounganidza pfungwa dzakakodzera kuti dzishande sechikwata kugadzirisa dambudziko kana kugadzirisa mhinduro.
Misangano yakakodzera haisi iyo nzvimbo yekurwisa kana kuyedza kunyadzisa dzimwe nhengo.
Misangano yakakodzera inzvimbo yekuremekedza, kusanganisa, kubatana pamwe nerutsigiro.
Misangano yakakodzera inotanga negadziriro yezvinangwa kupedzisa uye kupedzisa nehurongwa hwekuita hwekuti ndiani, chii uye nguvai.
Misangano yakakodzera ine nhengo dzinochengeta musoro wenyaya uye nenguva uye kuti nguva yemubatanidzwa yenhengo dzese isaparadzwe.
Misangano yakakodzera inofanirwa kunge iine nzvimbo yakasarudzika inozivikanwa pamberi penguva nenhengo dzese.
Misangano yakakodzera haisi iyo nzvimbo yekuvhara yako but (ndiyo email).
Misangano yakakodzera haisi iyo nzvimbo yekuyedza kuwana vateereri (ndiyo musangano).
Kune akasarudzika. Kufanana nemusangano uyu wakakodzera… o… uye neaya ane M & Ms.
Tags: misangano yakanakakuita musangano seiMisanganomitemo yemisangano
Yese Hofisi Yekumba Inoda Imwe!
Yakakodzera Email Kero Kureba
Dec 6, 2006 pa 1: 21 AM
Brandon anowedzera hombe posvo maererano nemutengo wemusangano: (huwandu hwevapindi * vanobhadhariswa mwero * kureba kwemusangano = $
Zvita 6, 2006 na3: 55 PM
Ndakavenga misangano mizhinji uye ndikawana, iyo misangano yechikamu chikuru, yakanga isina chekuita nemari kana mugove wevabatsiri. Iwe unofanirwa kutengesa urwu runyorwa kune vese mamaneja
Zvita 6, 2006 na4: 14 PM
M & M's akanaka… MaBrownies ari nani! Wakambove nemusangano nezve kuita misangano? lol
Zvita 6, 2006 na6: 04 PM
Misangano yemisangano… yakakanganwa iyo! Argh!
Ndira 20, 2011 na10: 09 PM
Zvimwe unofanira kuedza http://www.agreedo.com. Inogadzirisa akawanda emapoinzi ako anoita kuti misangano ive yakakodzera maererano newe.